Qatari Aho, ary Te Hanana Fahafahana Hanapa-kevitra Amin’izay Tiako Hovadiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Novambra 2016 5:18 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Ελληνικά, srpski, Türkçe, Nederlands, polski, русский, English
SARY: Public Domain via Pixabay
Avy amin'i Doha News Yousef, latsa-pitiavana tamin'ny vehivavy Eoropeana Tatsinanana iray ny olom-pirenena Qatari iray 28 taona, efa-taona lasa izay. Nanapa-kevitra hivady izy roa, saingy nandà tsy hankatòa ny fiarahana ny fanjakana Qatari, ka rava nony farany ny fiarahan'izy ireo satria tsy nanan-tsafidy afa-tsy ny misaraka izy ireo. Amin'ity lahatsoratra fanehoan-kevitra ity, Manazava amin'i Victoria Scott ny olana sedrain'ny Qataris rehefa manambady tsy olom-pirenena ao aminy i Yousef, ary koa ny antony hiheverany fa tokony ovaina ny rafitra. Nihaona tamin'ny vadiko aho raha nanao vakansy tany Eoropa. Nihaona tamin'ny alalan'ny finamanana izahay, ary nahatsapa fifandraisana avy hatrany. Raiki-pitia izahay. Natoky ilay antsoiko hoe Qatari nentim-paharazana aho taloha. Nino mafy ny kolontsainay sy ny soatoavinay aho. Ka rehefa nihaona tamin'ny vadiko, dia nanontany tena izay zavatra nataoko aho. Hafa firenena izy, tsy mitovy finoana amiko sy avy amin'ny kolontsaina hafa. Fanapahan-kevitra sarotra tamiko ny hanambady azy tany am-boalohany noho ireo antony ireo, saingy tapa-kevitra ihany aho ny farany fa te hiaina miaraka aminy; mandresy ny rehetra ny fitiavana.
Nanao mariazy sivily tany ivelany izahay, talohan'ny nandehanana niverina tany Qatar. Vaovao tanteraka ho azy izany rehetra izany. Sambany nitsidika ny firenena izy. Na izany aza, tian'ny fianakaviako ny vadiko vaovao ary nanomboka nanorim-ponenana tany izy. Zatra tsikelikely izy, saingy azo antoka. Zatra ny kolontsainay izy. Faly izahay. Saingy tsapako taty aoriana fa mety hivadika tsy araka ny antenaiko ny fandehan-javatra. Nihevitra aho fa hahazo fizakana ny zom-pirenena izy, amin'izay afaka monina ara-dalàna ao Qatar mandritra ny androm-piainany. Noho izany, ho Qatari avy hatrany ihany koa izay zanakay, ary hizaka ny zo hananako. Ny tsy fantatro dia tokony nangataka fahazoan-dalana hanambady hafa firenena tany amin'ny fanjakana Qatari aho.
Nahita aho fa nisy komity manokana misahana izany raharaha izany tao amin'ny Minisiteran'ny Atitany, ary tsy maintsy tokony nanaraka ny dingana aho. Raha tsy misy ny fahazoan-dalana avy amin'ity komity ity, tsy azo sokajiana toy ny ara-dalàna ao Qatar ny fanambadiako. Tsy manan-jo hahazo tombontsoa ho an'ny mpiasa manambady ao amin'ny orinasako aho, ary tsy mahazo tany avy amin'ny fanjakana, izay iray amin'ireo tombontsoa azon'ny Qataris manambady. Lavitra ratsy noho izany, na izany aza, ny hoe tsy afaka miara-monina ao Qatar izahay. Raha tsy misy ny fahazoan-dalana avy amin'ny minisitera, tsy mahazo na dia fahazoan-dalàna hijanona ao amin'ny firenena aza ny vadiko. Nieritreritra aho, araka izany fa resaka dingana arahina fotsiny izany.
“Tsy antony azo ekena” ny fitiavana
Naka hevitra tamin'ny olona sendra nandalo dingana tahaka izany aho mikasika izay tokony atao mba hahomby eo anoloan'ny komity. Nilaza tamiko izy ireo fa ny zavatra iray tsy tokony lazaiko dia hoe nanambady azy aho satria tiako izy – izay toa antony tsy azo ekena. Ho solon'izany, tsy maintsy nanoratra fanamarihana manazava ny antony tsy nahafahako nanambady vehivavy Qatari aho. Toa miahiahy ny manam-pahefana Qatari, fa tsy afaka mahita lehilahy Qatari ampy haka vady azy ireo ny vehivavy Qatari. Manan-jo hiahiahy momba izany izy ireo, saingy tsia kosa raha ny hevitro, ampy ny fandaminana ny fanambadianay. Noho izany, tsy maintsy nandainga aho. Nilaza aho fa tsy afaka nanambady vehivavy Qatari satria lafo loatra ny fandaniana, ary nangataka vehivavy Qatari maromaro hovadiana aho saingy nandà avokoa izy ireo. Nanery ahy ho mpihatsaravelatsihy ny lalàna. Tsy nolazaiko tamin'izy ireo ihany koa fa efa nanambady aho, satria mety nivadika tamiko avy hatrany izy ireo raha nahafantatra izany.
Miova ho Silamo
Nolazaina ihany koa aho fa mety ho vintana tsara hahazoana fankatoavana raha Silamo ny vadiko. Tsy nisy dikany tamiko izany, satria tsy mino aho fa mamaritra izay tsara sy ratsy ny finoana. Nanaiky ny vadiko kristianina amin'ny maha izy azy aho. Saingy nony farany, nangataka taminy aho raha te hiova Silamo izy mba hanampy anay amin'ny dingana manaraka, ary nanaiky izy. Tsy maintsy nandalo lanonana izy mba hiova amin'ny fomba ofisialy. Ary nanana pasipaoro vaovao misy sary nalaina miaraka amin'ny hijab izy–natao ho ahy izany rehetra izany. Nalefako ny sary, sy ny fanamarihana nosoratako, ary koa ny taratasy fanamarinana ny karamako, ary nahazo daty hanaovana fanadihadiana aho. Tonga nanohana ahy ny raiko, izany hoe nanaiky ny safidin'ny zanany lahy izy, sy ny safidy izay ho vady. Miresaka aminao tahaka ny manana adidy amin'izy ireo ny komity ahitana lehilahy fito, miresaka amin'ny fomba masiaka be, satria mila ny fankatoavan'izy ireo ianao. Nanontanian'izy ireo hatrany mikasika ny antony tsy nanambadiako vehivavy Qatari aho. Nilaza tamiko izy ireo fa mety ho samihafa tanteraka ny kolontsaina sy ny fomba amam-panaon'izay ho vadiko, na dia efa Silamo aza izy ankehitriny. Roa andro taorian'ny fihaonana, nolavin'izy ireo ny fangatahako.
Saingy tsy kivy aho. Ary nampiasa wasta aho avy eo. Naka ny raibeko zokiny indrindra hiaraka amiko ho any amin'ny Minisiteran'ny Atitany aho mba hijery izay azon'izy ireo atao, nanantena fa mety hanampy azy ireo kokoa sy hahatakatra kokoa ny fiarahana aminy. Toa tahaka ny nandaitra izany. Nilaza izy ireo fa nankatoa ny fanambadianay. Nanomboka nankalaza izany niaraka tamin'ny vadiko aho, saingy fitaka kay izany. Nisy ny dingana faharoa. Mila mankatoa izany ny Minisitry ny Atitany. Nivezivezy imbetsaka tao amin'io Minisitera io aho mba hanontany raha nankatoaviny izany, satria fantatro fa mety atao tahiry mandritra ny taona maro tsy kitikitihina ny antontan-taratasy tahaka ny ahy. Tsara toetra, sariaka sy mahalala fomba tamiko izy ireo, saingy tsy nankasitraka ny fanambadiako. Nolazain'izy ireo tamiko fotsiny fa hijery izany izy ireo. Nandritra izany fotoana izany, ny hany azoko natao dia nangataka visa ho an'ny mpizaha tany isam-bolana ho an'ny vadiko. Naharitra roa taona izany. Niara-nipetraka tamin'ny fianakaviako ny vadiko, saingy tsy nahatsapa filaminana sy fiarovana izahay. Fantatray fa mety holavina amin'ny fotoana rehetra ny visa-any. Avy eo reko fa nosokafan'ny Minisitra ho an'ny olom-pirenena ny majlis-ny, ka nankany aho ary nilaza taminy momba ny olako manokana. Nilaza izy fa hijery izany. Ny ampitso anefa, nolazaina aho fa nolavina ny fangatahako ary tokony hanadino izany aho fa tsy manohy izany intsony. Tsy nolazain'izy ireo tamiko akory ny antony. Avy eo niharatsy ny toe-draharaha. Natsahatry ny fanjakana ny fanavaozana ny visa ho an'ny mpizahatany an'ny vadiko.
Olana tena mahatsiravina izany. Tsy te handao an'i Qatar aho, tanindrazako izy. Ao no misy ny fianakaviako, sy ny asako. Ary raha mandao ny asako aho, dia tsy mino fa afaka manohana ara-bola ny vadiko. Noho izany, nanapa-kevitra hanao izay tsapako fa rariny ho azy aho. Nolazaiko izy hoe: “Tsy manan-janaka isika, ary miandry ahy ianao. Nilaza taminao aho fa misosa tsara ny zava-drehetra, saingy tsy afaka mampanantena zavatra aminao intsony aho. “Tsy maintsy nandao an'i Qatar izy rehefa lany daty ny visa-ny. Nisaraka izahay. Vaky fo aho. Nanohy nanohana azy ara-bola nandritra ny fotoana vitsivitsy aho satria tsy maintsy nandao tampoka izy, saingy tamin'ny farany, nilaza aho fa tsy maintsy mitsahatra izany, ary tsy maintsy manapaka ny fifamatorana rehetra izahay. Nandratra mafy ahy ihany koa izany. Manana vady vaovao izy ankehitriny, ary manana zazakely. Mifandray izahay ary faly aminy aho. Saingy mampalahelo ny mahita vehivavy notiavinao kanefa nanambady olon-kafa, miaraka amin'ny zazakely. Heverina ho zanako izany..
Nanova ahy ny fanambadiako. Nanova ahy tamin'ny mahazatra ahy, ka nahatonga ahy hanontany ny lanjan'ny kolontsainay. Tsy mazava amiko ny antony, ohatra, izahay lehilahy Qatari dia afaka mankany amin'ny klioba azo hisotroana toaka, kanefa nilaza tamiko ny komity fa tsy mifanaraka amin'ny antsika ny kolontsaina sy ny fomban-drazan'ny vadiko. Manafintohina ny mahita fa miresaka momba ny zon'olombelona eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fireneko kanefa tsy mamela olom-pirenena hanan-jo hanambady izay safidiny. Ary nahoana no ekena ny manambady vady faharoa na vady fahatelo, kanefa mandà tsy hanome alalana ny lehilahy mba hanambady olona iray monja? Nahoana no nolavina ny fangatahako? Satria ve tsy manan-danja loatra ny fianakaviako? Tsy mahafantatra ny zon'ny olona ve isika? Mahafantatra lehilahy Qatari marobe manambady vehivavy hafa firenena aho izay nahazo fankatoavana tao anatin'ny iray volana latsaka, satria nahafantatra olona tao amin'ny fanjakana izy ireo. Manana fanontaniana be dia be aho. Te hanorina tokantrano aho, saingy tsy te hanambady Qatari, na hanao mariazy nentim-paharazana. Hafa loatra ny fomba fisainako. Manaja tanteraka ny vehivavy Qatari aho. Anabavy sy zanaka vavintsika ireo, saingy tsy misy idiran'ny firazanana, na fivavahana na zom-pirenena izany. Momba ny safidy manokana izany. Mino aho fa tsy maintsy handao an'i Qatar ary honina any ivelany raha te-hanambady vehivavy hafa firenena. Halako fa tsy maintsy ho toy izany. Tiako ny fireneko. Tsy te-handao an'i Qatar aho na handao ny fianakaviako, saingy inona no safidy hananako?
Efa navoaka tao amin'ny Doha News ny dikan'ity lahatsoratra ity.